क्यामरा म्यानलाई देखेर सुष्मिता शेनले लगाइन लिपस्टिक र १५ वर्ष सानो ब्वाईफ्रेन्डलाई सोधिन कस्तो देखियो ! भिडियो बन्यो भाइरल – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodक्यामरा म्यानलाई देखेर सुष्मिता शेनले लगाइन लिपस्टिक र १५ वर्ष सानो ब्वाईफ्रेन्डलाई सोधिन कस्तो देखियो ! भिडियो बन्यो भाइरल
February 12, 2019 Tulasa Karki Bollywood, News 0
बलिउड अभिनेत्री सुष्मिता शेन सोमबार साझ एक अवार्ड कार्यक्रममा सामिल भएकी थिन । उक्त कार्यक्रममा उनी मात्र नभएर उनले आफ्नो साथमा आफु भन्दा १५ वर्ष सानो ब्वाईफ्रेन्डलाई पनि लिएर गएकी थिन ।
भारतीय संचार माध्यमका आनुसार, जब उनलाई ब्वाईफ्रेन्डसँग देखे तब क्यामरा म्यान हरुले उनको फोटो खिच्न थाले । सोहि समय उनले आफ्नो ब्यागबाट लिप्सटिक झिकिन र मज्जाले लगाएर आफ्नो ब्वाईफ्रेन्डलाई इशारा-इशारामा सोधिन कस्तो देखिएको छ । र यी दूईले कानेखुसि गरेर एकअर्काको हात समातेर् निकैनै रोमान्टिक फोटो ग्राफारलाई पोज दिए ।
दुइ जना एकअर्कामा निकै हराइ रहेको थिए । जुन भिडियो अहिले सोसल मिडियामा निकै भाइर भईरहेको छ । भने त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरुले नेगेटिभ कमेन्ट समेत गरेका छन् ।